Andramena hodorana, mahakely finoana
Efa tsy mahita holazaina intsony ireo olona ao amin'ny fitondrana ka manaotao foana amin'ny resaka fitantanana ny harena voajanahary. Fantatra nadritra ity herinandro ity ny fikasana handotra ireo andramena any amin'ny tany lavitra andriana. Mifanesy ireo fanontaniana apetraky ny olona mahakasika izany fihetsika hafahafa izany.
"Dia mihevitra ny rehetra no kentrina angamba ireo olona miseho ho mpiaro ny tontolo ireo. Hazo marobe mipetra-potsiny ireo ve foiny ho lasa lavenona? Hevi-petsy ihany izany satria raha toerana lavitra no misy ireo dia inoako marina fa efa voaondrana ny sisa tavela ary hazo hafa no entina hodorana ka haseho ny olona hoe indreo fa potika ireo hazo sarobidy. Raha handany vola amin'ny fandorana ihany, tsy aleo ve taterina ho tonga eny am-pelatananan'ny mpanao sokitra ny hazo ka azo antoka fa tonga any amin'ny vahoaka madinika ny tombon-tsoa? Miandry izahay Malagasy ny amin'ny fanapahan-kevitra feno fahendrena fa zary lasa ataon'ny sasany fangoronan-karena fotsiny ny harena ikambanana. Izy eo ihany mitango ny tombony ary ny sahirana mihamahantra hatrany ary tsy afaka miandrandra na izay sombintsombiny latsaka amin'ny latabatr'ireo akory. Araka ny fahantarako azy dia hazo matez ary tsy mety ho lo ny andramena koa nahoana no simbana", hoy Lahatra, mpiasa tena.
Mivarahontsana tanteraka ny rehetra mieritreritra izay heverina ho tomon-tsoan'ny firenena lasa fatiantoka ho azy. Andrasan'ny maro ny fanatanterahana ny fandoroana ary rariany ny hisian'ny olon-tsotra hanatrika izany fa tsy hotontosain'ny ministera sy ireo mpiara-miombonantoka irery ka zary lasa "baolina" sy "tataka" araka ny fitenin-jatovo azy ireo hazo sisa tavela. Hi hita eo ny tohin'ny tantara.